Siyaasi Cali Xaaji Warsame oo Radio Daljir uga waramay dhagaxdhigii Dekadda Garacad (dhegayso) – Radio Daljir
Siyaasi Cali Xaaji Warsame oo Radio Daljir uga waramay dhagaxdhigii Dekadda Garacad (dhegayso)
Agoosto 1, 2018 2:10 g 0
Siyaasi Cali Xaaji warsame oo ku sugan magaaladda Garacad ee gobalka Mudug ayaa ka hadlay dhagaxdhigi dekadda Garacad oo ay ka soo qaybgaleen masuuliyin kala duwan oo u ugu horeyo Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo issimo Puntland.
Inkasta oo la sugayaay in Dekadda Garacad uu dhagaxdhigo RW kheyre hadana ma aysan noqon oo RW Kheyre waa uu ka baaqsaday safarka iyo iyo dhagaxdhiggaba, taasna waxa ay abuurtay hadalhayn bulshada iyo siyaasiyiinta Puntland, ayada oo siyaabo kala duwan looga hadlay go’aanka ay Garacad ka qaateen RW Kheyre iyo Madaxweyne Farmaajo.
Siyaasi Cali Xaaji Warsame ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay in Kheyre uu imaan waayo Garacad, asaga oo si weyn imaatinkiisa loo sugayey. Cali Xaaji ayaa sheegay in RW Kheyre looga fadhiyo in uu shacabka Puntland u sheego sababta dhabta ee uu u imaan wayaay Garacad, asaga oo markii hore ballanqaaday in uu ka qaybqaadan doono dhagaxdhigga Dekedda Garacad.
Arrimo badan oo sidoo kale ku saabsan sannadguuradii 20-aad ee Puntland ayuu Cali Xaaji uga waramay Wariye Maxamed Lakiman oo ku sugan xarunta Daljir Gaalkacyo.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 479 Wararka 20831
Musharixiinta Puntland ee Focus Group oo ka hadlay safarka Kheyre ee Puntland